MASAAL KU SAABSAN BOQORTOOYADA ILAAH – Akhbaarta Wanaagsan
MASAAL KU SAABSAN BOQORTOOYADA ILAAH
Posted on October 1, 2016 May 29, 2017 by Raghe
Xertii Ciise ma aysan garan waxyaalihii uu ka hadlaayay ee ku saabsan boqortooyada Ilaah. Sidaas daraaddeed Ciise wuxuu isticmaalay Tusaale caadi ah oo ay fahmi karaan. Markaasuu ku yiri ninka beerta abuuraa waa sida ninka dadka wacdiya, Markuu wacdiyo wuxuu malaysanaa in wacdigiisu mirro dhalo waayo ereyga Ilaah waa abbuur oo kale (Markoos 4:26) in wacdiskaas uu qalbiyadooda ku beermi doonmo oo ay wanaag fiican la imaan doonaan ayuu rajeynaa wacdiyahaasu (Markoos 4:27, 28) .
Wuxuuna aaminaa inuu arki doono dad badan oo injiilka aqbalay taasuna waa gurashada wixii uu abuuray. Wuxuu aaminayaa in abuurkaasu barakoobi doono oo badan doono dadka barakadaas heli doonaana waa kuwa ilaah iyo eraygiisa xaqa ah qalbiyadooda u furay.
Beerreygu asagu shaqo kuma lahan mirraha,markuu abbuuro kadib waayo ilaah ayaa mirro dhaliya dadku wey abuuraan oo keliya. Isagu waa inuu sugaa si iimaan leh,waa inuu shimbiraha iyo xayawaanada ka ilaaliyaa oo welibana waraabiyaa oo uu falaa beerta ama geed qaad kusameeyaa.
Ciise ayaa u sheegay masaal kale oo ku saabsan boqortooyada Ilaah. Waxa ay ahayd sida abuur ah iniin yar oo lagu beeray beer. In ka yar hal sanno waxa uu noqdaa mid dhir badan soo saara ama dhir badan dhala.
Boqortooyada Ilaahay waxay dhulka ku bilaabatay dad aad u yar, kuwa raacsan Ciise ma aysan ahayn dad aqoonyahano ama awood sare leh,laakiin waxay ahaayeen dad caadi ah.weliba dadkaas Ciise Masiixi raacsanaa intay noolaayeen ayay dunida ku faafiyeen runta Ilaah eek u jirta Ciise Masiixi haddaba aqri (Falimaha Rasuullada 1: 8; 4:33).
Maanta, runta waa lagu wacdiyaa, meel kasta. Ragga iyo dumarba kuwa diida iyo kuwii aqbalaba. Ruuxa Quduuska ah ayaa soo saarta dalagga. dadka Ilaah ee goosan doona beergooyska waa anaga wacdiyayaasha ah. Laakiin Ciise masiixi wuxii yiri beerta iyo mirrahu waa badan yihiin balse kuwa goosan lahaa waa yaryihiin, haddaba walaala yaal beer goosashada aan u nimaadno oo shaqaalaha Rabbiga noqono (Matayos 9:37).
Posted in All resources, Lectures, Qiso gaaban, Qoraal, WaxbaritaankaTagged bible
2 thoughts on “MASAAL KU SAABSAN BOQORTOOYADA ILAAH”
Raghe Post author October 1, 2016 Reply
Maroodiga October 1, 2016 Reply